तिमी बाँच्नु पथ्र्यो (ज्योति ज·ल) - [2008-03-08]
मैले विवाह गरेँ । यो एउटी कुमारीको विवाह होइन । विवाह कुमारीलाई डर र कुतकुतीको सम्मिश्रण हो तर एउटी अधवैँसे महिला, दुइटा बच्चाकी आमा, मैले पुनः बिहे गरेँ । बिहे नगरे म के गर्थेँ - यो शरीरले यौनको रस मज्जाले चाखेर हुर्किएको तीसको उमेरको । बिहेको संरचनावेगर कुनै महिला यौनिक तृप्ति प्राप्त गर्दिन । यो समाजको परिवेश हो । बसेकै थिएँ छोराछोरीको जिम्मा लिएर । तिमी मेरो भरोसाको सम्पत्ति छातीभरि बोकेर विदेशियौ । त्यो म नै थिएँ तिमीलाई बिदा दिने । जाऊ, कमाऊ र आऊ भन्ने । तिमी प्यारी पत्नी, त्रि्रो प्रेम पनि । खै प्रेम केलाई भन्छन् - कसरी यो आत्माबाट उत्पन्न हुन्छ र शरीरमा ठोकिएर मर्छ - तिमी गएको डेढ वर्षै त्यो प्रेम टाडाटाडा अदृश्यजस्तो लाग्न थाल्यो । प्रेम त अदृश्य नै हुन्छ । फेरि किन पातलियो - आतेस लाग्न थाल्यो । म मेरै समिपको कुनै अर्कै शरीरप्रेममा अल्भिmएँ । छोराछोरीको तोतेबोलीसँग पनि म बट्टारिएँ । बुबा-आमा -सासु-ससूरा) को सन्देहपर्ूण्ा बातहरूलाई दर्ुइ चार दिन त सहेँ । नभएको कुरा पनि त थिएनन् ती । कुन प्रेम हो त्यो - तर म विस्तारै तानिँदै गएँ । कहिले बजार जाने निहुँले श्यामसँग भेट्थेँ ।
छेउमा वस्ता उसको सासको गन्धले पनि पग्लन्थेँ । एउटै उमेरका थियौँ र पनि ऊ अविवाहित थियो । कति सम्हालिएँ । थुप्रैपटक आफैँलाई गाली गरेँ, सम्झाएँ । मलेसियाबाट त्रि्रो फोन आइरहृयो । मीठो बोल्यौ । कहिल्यै दुःखको कुरा पनि भनेनौ । म त्रि्रो फोन राखेपछि झन् द्वन्द्वमा फसिरहन्थेँ । छोराछोरीको अनुहार हेरेर टोलिन्थेँ । फेरि किन बदलिएँ । तिमीले पैसा पठाइरहृयौ । कति दुःख गर्‍यौ होला । म भित्रभित्रै दुःखी हुन्थेँ । कसले पत्याउला - अब यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । तिमीलाई पर्खिएर बूढी हुँली बरु, सेतै फुलुन्जेल नआए पनि मरौँला बरु भन्थ्यो एक मनले । फेरि श्याम, ऊ संयोगले मसम्म आइपुगेको उपहारझैँ थियो । कसरी पर भाग्न सकौँला - श्याम, मेरी भाउजूको काकाको छोरा । एकदिन बुधबारे बजारमा भेट भयो । कुरैकुरामा ऊ रातै बस्न आयो मेरो घरमा । मार्केटिङ गर्दोरहेछ एउटा हर्वल वस्तुको शृङ्गारका सामान, चिया, ज्जन...यस्तै यस्तै । म ग्राहक बनेकी थिएँ त्यसको । उसले सुरुमा पैसा लिन्थ्यो । मसँग अब पैसा पुग्दो थियो । तिमीले पसिना चुहाएर पठाएको पैसा ... । म पसिनाको सम्मान गथेँ तर अभिमान थिएन त्रि्रो पैसामा । म भित्रभित्रै कुनै अर्कै उदासिनताले ग्रसित थिएँ । त्रि्रो पैसाको एक-एक हिसाब राखिदिएकी थिएँ तर अब यस हिसाबको के कुरा गरौँ । कुरा त त्रि्रो मृत्युको गर्नुछ । मलाई पुराना उखानहरूले पनि उल्टा अर्थ दिए । र्'मर्द' को प्रतीकले मलाई गिज्याइरहृयो । मैले तिमीलाई कहिल्यै अविश्वास गरिँन तर तिमी त्यहाँ के चोखो बस्यौ होला र ! मैले एउटा परदेशीलाई पत्याइँन पनि । आफू तिमीभन्दा चुकेकी रहेँछु क्यारे । समाजले कसरी चियो गर्छ एउटी आइमाईलाई -मैले तल्लोघरकी सीमाको हुइँया खवरहरू सुनेर पत्याएकी छु । ऊ लोग्ने मरेकी विधवा, एउटी छोरी र ऊ... । कोही छिमेकी पुरुष आकृति त्यहाँ गयो कि बात बढिहाल्थ्यो गाउँमा । म विरुद्धमा थिएँ त्यो हल्लाको । सीमा विधुवा थिई तर काँतर थिई कि विवश थिई - त्यो मैले बेहोर्नु परेको थिएन... । म त श्यामकै वरिपरि रुमल्लिइरहेकी राधासरी थिएँ ।
सकुन्जेल सन्तानलाई अँगालेर सुतेँ । रातले कुटुन्जेल द्वन्द्वमा छचल्किएर उठेँ । फेरि एकदिन श्याम आयो । यसरी श्याम आउनुमा म डराइडर्राई खुसी हुन थालेँ । न ऊ प्रेमका कुरा गथ्र्यो, न ऊ उति रसिलो थियो तर ऊ आकषिर्त भएको पत्तो मलाई राम्ररी थियो । कहिले ठूलो साँझमा झपक्कै कसैले नदेख्नेगरी ऊ पाहुना बनेर आउँथ्यो । छोराछोरी चकलेट र अन्य उपहार, खेलौना पाएर मख्ख पर्थे । सायद बाबुको उपस्थितिको प्यास पनि मेट्थे होलान् । उनीहरू खुसी हुन्थे श्यामलाई देखेर । म पनि त्यही खुसीमा सामेल हुन्थेँ । खाना खाएर बच्चाहरू, सुतिहाल्थे । श्याम र म धेरैबेर कुरा गरेर बस्थ्यौँ । त्यसो त हामी साथीजस्तो पनि भइसकेका थियौँ । कति सहयोग व्यवहारले उसले गथ्र्यो पनि । त्यो दिन, झ्यालमा सेतैपर्दा हल्लिरहेको थियो । शीतल हावा, नीलो बल्बको मधूरो प्रकाश र एकजोडी स्त्री-पुरुष साथीहरू... । समाजको भाषामा म त्यसैदिन बिटुलिएँ । इमानको परिधि हुन्छ भने म त्यसैदिन बेइमान बनेँ । प्रकृतिको संरचना-स्त्री-पुरुष साथी, खै हारेजस्तो पनि लाग्यो तर शरीरका हरेक कोषकोष बिहान उठ्दा हलुका भएका थिए । तर्क-वितर्क, सत्य-असत्य, आमा-पत्नी, सबै नामबाट आफूलाई केलाएँ । यसरी चल्दै गयो महिना/दर्ुइ महिना/छ महिना... । महिनापछि महिना... । मेरो महिनावारी रोकियो । म अत्तालिएँ । श्यामलाई भनेँ । उसले आफ्नै कुरा गर्‍यो । "हेर अब जे भो भो । हामी बिहे गरौँ ।" मलाई आफ्नो आतेस उतार्ने बलियो स्थान मात्रै मिलेन ऊप्रति अनौठो र्समर्पण पनि जाग्यो । ऊ जति शान्त थियो, त्यति नै उसको निचोड देखेर मेरो अपराधबोध अलि हलुका भयो । एकातिर सम्पत्ति कमाउन गएको लोग्ने, अर्कोतिर छोराछोरी र मेरो घरपरिवार अनि यो आकस्मिक परिवेशको अवतरणले मसामु पालैपालो औँला उठाउँथे र झर्थेँ । अनन्तः म समर्पित आमा पनि भइँन, समर्पित पत्नी पनि भइँन । म श्यामसँग बिहे गरेर त्यो गाउँ, जिल्ला र अञ्चलसमेत छोडेर बुटवलमा बस्न थालेँ । कहिलेकाहीँ छोराछोरीको एकदम याद आउँथ्यो । हिँड्ने बेलामा बजार जान्छु भनेर ढाँटेर हिँडेकी थिएँ । उमेशलाई सुम्सुम्याउँदै भनेकी थिएँ- "आमाघरमा बस्नु है, राति भयो भने बहिनीको ख्याल राख्नु । उसका निर्दोष आँखाले झ्वाट्ट आमाको फरक अनुभव गरेजस्तो झलक्क हेर्‍यो र उठेर कुद्यो । आमाघरमा राति कतिबेरसम्म बसेहोलान्, पर्खिएहोलान्, सुकसुकाएहोलान्, रोएहोलान् । यो अपराधबोधले मेरो मनमा सुइरोजस्तो घोचिरहन्थ्यो । आफ्नै बाटोमा हराएकी म उनीहरूको भविष्यबाट पनि गुमनाम भएँ । अब यो पीडाको पनि के व्याख्या गर्नु । कतिपल्ट उनीहरूको यादमा एक्लै रोएँ, श्यामसँग पनि डराएँ, मेरो मातृत्व मात्रै तपतप खसिरहृयो एक्लै । बाबुहरू जो भए पनि कोखको उत्पत्ति समान हुँदोरहेछन् । कहिलेकाहीँदेखिने सपनामा तिनै बालकहरू झल्किन्थे आँखाका डिलमा । अब त बालकबाट किशोर भइसकेका होलान् । थुप्रै वर्षबिते । सम्झन्थेँ बाबु पनि फर्किएहोलान् । हाम्रो एउटै मात्र सन्तान थियो अब सुमन उतै दोकान गरेर हामी एककिसिमले स्थायी भयौँ । स्थायी त मेरो पर्ूवको जीवन र म पनि थियौँ । टेलिभिजनमा, रेडियोमा पर्ूवका खबर सुनेर चङ्गा हुन्थेँ । अक्सर श्याम पनि घरको कुरा गर्थे सुसाउँथे र निदाउँथे । कताकता मेरो इतिहास मसँगै हिँड्छ मनमा । कहिले पश्चातापको रङ छ्यापिन खोज्थ्यो तर श्यामको नजिक म खुसी थिएँ । समयसँगै घुम्दै थिएँ उसकै वरिपरि । फेरि अचानक शम्भुसँग भेट भयो । मेरो दमकको छिमेकी । ऊ पनि व्यापारको सिलसिलामा बुटवल बस्न थालेको रहेछ । कहिलेकाहीँ मूलघर जाँदोरहेछ ।
मभित्र मेटिएका ती प्यारा अनुहार फेरि सलबलाउन थाले । उमेश, आशा र उनीहरूको बाबु कृष्ण । उसले चोइटिएका सीसाजस्ता खबरहरू बोल्यो । म अचानक चिरिएँ उसले ओकलेका सीसाहरूबाट । मैले आफूलाई अपराधी होइन, हत्यारा नै सम्भिmएँ । हो मैले प्रत्यक्ष उसको हत्या गरिनँ तर म हत्यारा बनिसकेकी रहेँछु । ऊ मरेछ, मेरो पर्ूवपति । मेरा विछोडिएका छोराछोरीको बाबु । आफ्नी पत्नीको आघातपर्ूण्ा खबर सुनेपछि उसले आफ्नो मूल्य त्यसैमा बगाइदिएछ । मप्रति देखाएको उसको अगाध त्यागले थिचिएर म आलसतालस भएँ । त्यसैत्यसै आफू यति घृणित महसुस गरेँ कि मलाई दिन सुहाउने अब कुनै शब्दै छैनन्, शब्दकोशमा । सयौँ भोल्टको बिजुली मेरो शरीरबाट पार हुँदैछ र मैले अझै सहेर बस्नुछ.. चुपचाप । संवेदनाको गहन ऐनामा मेरो कुरूप अनुहारको प्रतिविम्ब भित्रभित्रै थर्कियो र चर्किएर झर्‍यापझुरूप भयो । वास्तवमा ऊ मेरोलागि बाँचेको रहेछ । म हिँडेकी सुनेपछि कयौँ महिना बिरामी परेछ । "त्यहाँ रीता छैनन्, मेरो जीवन पनि छैन" भनेर पत्रहरूमा लेख्थ्यो रे । त्यो पसिना, त्यो पीडा, त्यो प्रेम ! जम्मै जिन्दगी उसले समाप्त गरिदिएछ आफ्नो । अर्थात् उसले आत्महत्या गरेछ । त्यो निस्वार्थ, स्निग्ध, त्यागी प्रेमको आभाले यतिखेर मेरो आत्मा पत्पत् धुवाइरहेछ । यो समाजको संरचना, आमाबाबु, छोराछोरी, यी शरीरका हरेक अङ्गहरू, सबै थुपारेर आगो लगाउनुजस्तो ताप छ भित्र तर म खरानी हुन सकिरहेकी छैन । यताको सानो घरबार, श्याम र सुमन । मीलेको गृहस्थी, शान्त श्याम, सबै हेर्छु यी परका टुहुराहरूकी आमा, जसले आमा मात्रै होइन, बाबु पनि खोसेकी छे । तिनीहरूको अधुरो स्नेह कल्पिन्छु र तानिन्छु सधैँ । बीचमा एउटी हत्याराको बोझ बोकेर हिँडिरहेँछु । मेरो आत्मसंयम, मेरो खेलाँची मनोदशा, शरीरमोह वा आघातको सजायले टुट्न लागेको डोरीजस्तो छ । म ड्रि्रेसनको घोर खाल्डोमा दिन प्रतिदिन धकेलिँदैछु । वर्षौं बिताइसकेँ । एउटै प्रश्नले पिटिन्छ- ऊ किन मर्‍यो - मैले उसलाई मारेँ वा उसले उसैलाई मार्‍यो - मलाई त जीवनभर मेरै जिन्दगीले मारिरहेछ । तैपनि यो पापी आत्मा आफैँलाई सान्त्वना दिन्छ घरिघरि । अब कुनै त्यस्तो मौका आउँदैन । नत्र सोध्ने थिएँ उसलाई- किन मर्‍यौ तिमी - बाँच्नु त जसरी पनि पथ्र्यो तिमीले अनि भन्ने थिएँ.. तिमी नमरेको भए हुन्थ्यो मेरोलागि पनि ।
Dear Biswas Jee
I am writing few lines in response to your email; however you have already madeagood suggestion. I think the name is 'Jyoti Jangle'. She lives in Biratngar working inabank. We usually see her in programmes in Biratnagar. I can convey the message when see her.
I also think that an article published publicly can be taken asamaterial for non-business purpose with mentioning its due name of the writer and its source is an ethical.
Thanks for your intrest. We received this article (http://www.sahityaghar.com/modules/detail.php?ID=2481&modID=10) from Madhupark. Actual we don't have right to allow. Better contact with writer however every writer loves to make famous own creations that's way you may broadcast this story but you must need to mention sourse and writer name. This is great opportunity for us. Thank you
If you know (him/her) please pass this message to respective person.
From: nayan kc
Subject: For the permission
Dear director/ editor
Its me Nayan kc from ABC News Radio 100.6 MHz Ktm.I want to tell you that I am an Anchor of the programme named "ABHIBYAKTI MANAKO" A complete literature programe on ABC News Radio.
I know about your site from Kantipur national dailly,I log on your site,I like so much. Sir in your story section i likeastory named ' TIMI BACHNU PARTHYO, Jyoti Jal' . I want to broadcast this story on our programe and I want your permission and I also want the contact number and address of Jyoto Jal.
I am waiting your email soon.